HomePod wuxuu ahaa mashruuc inkaaran Apple oo shaqeynayay sanado badan | Waxaan ka socdaa mac
HomePod wuxuu ahaa mashruuc inkaaran Apple oo aan ka shaqeynayay sanado badan
Mar labaad iyo sida Apple noo caadeysatay sii deyntiisii ​​ugu dambeysay, in yar ka hor toddobaad ka dib ayaa dib loo dhigay soosaarka wax soo saarka HomePod, sidaa darteed Ma noqon doonto shay rabitaan ah Kirismaskan, wax xaqiiqdii aan si fiican ugu qaban doonin Tim Cook.
Laakiin waxay umuuqataa inaysan ahayn wararka kaliya ee laxiriira kuhadalka aftahanimada Apple ee soo ifbaxay maalmahan, tan iyo sida laga soo xigtay Bloomberg, howsha abuurista HomePod ee kasoo bilaw Waxay ahayd mid ka mid ah kuwa ugu qallafsan xusuusta shirkadda, Mashruuc la joojiyay oo dhowr jeer dib loo bilaabay, ilaa ugu dambayntii la soo bandhigay bishii Juun ee la soo dhaafay iyada oo loo marayo qaab dhismeedka WWDC.
Mid ka mid ah xogta ugu xiisaha badan, laga bilaabo horumarinta mashruucan, ayaa ah in nashqadihiisii ​​ugu horreeyay, HomePod waxay ahayd hal mitir oo ay ku hadlayaan tiro aad u tiro badan, Naqshad hubaal ah in si ballaaran loo dhaleeceyn lahaa haddii ay iftiinka mar uun arki lahayd. Mashruucani wuxuu mas'uul ka ahaa injineerada maqalka ee Mac, injineerada doonayay in dhawaqa uu noqdo kan ugu fiican suuqa waxaana la hagaajiyay naqshadaha qaar ee shirkadaha JBL, Bose iyo Harman Kardon.
Sida laga soo xigtay Bloomberg, qaar ka mid ah injineerada ayaa lagu eedeeyay inay macluumaad u gudbiyeen Amazon, kaasoo bilaabay Amazon Echo, oo ah afhayeenka caqliga badan ee Alexa ee maareynta shirkadda, laba sano ka dib markii Apple ay shaqo ka bilaabatay HomePod. Apple waxay u heellanayd inay ku mashquusho mashruuc mar kale aad u soo daahay maaddaama suuqa hadda jira ay inta badan ku badan yihiin aaladaha Amazon ee ay maamusho Alexa, sidaa darteed shirkadda ayaa lagu qasbay inay bedesho shaqadii ugu dambaysay ee qalabku u lahaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » HomePod wuxuu ahaa mashruuc inkaaran Apple oo aan ka shaqeynayay sanado badan
Maamul cusbooneysiinta macOS iyo abka App Store
Kiiska ilaalinta daran ee loogu talagalay MacBook-gaaga